उत्तम मार्केटिंग: मार्केटिyond पछाडि हेर्नुहोस् Martech Zone
उत्तम मार्केटिंग: मार्केटिyond पछाडि हेर्नुहोस्
बिहीवार, जनवरी 3, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मार्केटिंगको विशाल अंश भनेको तपाईंको व्यक्ति, उत्पादन वा सेवा समर्थन गर्न सामग्रीको असीम स्ट्रिम राख्ने क्षमता हो। व्यापार को दुनिया मा, चीजहरु दिन प्रति दिन परिवर्तन - हामी नयाँ व्यापार, हामी नयाँ उत्पादनहरु को विकास, हामी नयाँ सेवाहरु को प्रस्ताव र हामी नयाँ ग्राहकहरु प्राप्त गर्दछ। प्रत्येक कार्यक्रम नयाँ सामग्री को लागी महान चारा प्रदान गर्दछ!
वास्तवमा, कर्पोरेट वेब साइटमा उत्कृष्ट सामग्री चलाउन सक्ने एकमात्र तरीका भनेको मानिस, उत्पादन, सेवा वा ग्राहकहरूबाट टाढा हुनु हो। त्यो गर्न सक्छन् हुन्छ र यो सायद राम्रो संकेत हो कि ब्लग वा अन्य मार्केटिंग माध्यम वास्तवमै तपाईंले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दैन।
क्रिसले आज मलाई सराहना गरे कि म पानी जस्तो सामग्री सिर्जना गर्न सक्षम छु। यो सँधै सजिलो हुँदैन तर यहाँ म कसरी गर्छु भन्ने गर्छु।
कसरी धेरै सामग्रीमा ट्याप गर्ने
कारण म सामग्री समाप्त छैन कारण मेरो ब्लग मा एक कभर छ विस्तृत शीर्षकहरूको swath। मँ टिप्पणी गर्न सक्छु फारम प्रमाणीकरण एक दिन, बोर कि पुस्तक मलाई अर्को, कसरी गर्ने PHP र MySQL को साथ दूरी गणना गर्नुहोस् र एक WordPress चिमटा केहि अन्य दिन।
यी सबै मार्केटिंग टेक्नोलोजीको क्षेत्र भित्र छन्। फारम प्रमाणीकरण फ्रन्ट-एन्ड, वा धेरै देखिने, सफ्टवेयर अनुप्रयोग वा वेबसाइटको अंश हो। यदि तपाईं फारमहरू प्रयोग गर्न सजिलो बनाउन सक्नुहुन्न र प्रयोगकर्ता अनुभवमा ध्यान दिनुहुन्न भने यसले अन्तरिक्षमा तपाईंको विश्वसनीयतालाई प्रभाव पार्छ… र नतिजाको रूपमा तपाईंको मार्केटिंगमा असर पर्दछ - या त धारणालाई पार गर्नका लागि वा यसभन्दा अघि सर्नको लागि।
एक शब्दयुक्त पुस्तक? ठिक छ, यो पुस्तक हो कि कति कम्पनीहरू द्रुत रूपमा बढ्छन् समर्थन डाटा बिना भन्छ कि यो गर्नु पर्छ। को काला हंस। त्यो बजारका लागि महत्वपूर्ण छ, हैन? यो हुनु पर्छ!
दूरी गणना गर्दै? तपाईंको ग्राहकहरु कहाँबाट आउँदैछन्? यदि तपाईं एक खुद्रा विक्रेता हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई थाँहा छ कि तपाईंको ग्राहकहरू कहाँबाट आउँदैछन् भनेर राम्रोसँग थाहा हुन्छ ताकि तपाईका वेब विजिटरहरू कहाँ छन् भनेर कसरी पत्ता लगाउनु राम्रो हुन्छ।
र वर्डप्रेस ट्वीक गर्दै? ठीक छ, पोस्ट सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई तपाईंको वेबसाइटमा सम्बन्धित सामग्री प्रदान गरेर र खोजी गर्ने नयाँ खोज्नका लागि खोज इञ्जिन अनुकूलन विधिहरू प्रदान गरेर।
मार्केटिंग केवल बजार ब्लग, पुस्तक र सम्मेलन मात्र होईन
यदि तपाईं आफैंलाई सोध्नुहुन्छ कि आजकल तपाईंको बजार विभाग को हो भने, तपाईंले 'ओएल' संगठनात्मक चार्ट भन्दा पर हेर्नु पर्छ। तपाईंको कम्पनीमा प्रत्येक व्यक्ति तपाईंको बिक्री से ग्राहक तपाईंको ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को लागी तपाईंको मार्केटिंग लाई असर पार्न सक्छ मान्छे भन्दा राम्रो कल्पना न्यूज़लेटर्स बनाउने मान्छे भन्दा। यो समय आयो कि एक मार्केटरको रूपमा तपाईंले ध्यान दिन थाल्नुभयो!
मलाई विश्वास गर्नुहुन्न? एक गर्नुहोस् "हन्टिंगटन बैंक बेकार" को लागी गुगल खोजी। एक कमजोर वेबसाइट, भयानक समर्थन र अयोग्यतामा फ्रिज गरिएको स्टाफको संयोजनले खोजी ईन्जिनहरूको शीर्ष बनाएको छ! यो कसरी राम्रो मार्केटिंगको लागि हो?
ब्लग मार्केटिंगमा केन्द्रित छैन
त्यहाँ शीर्ष मार्केटिंग ब्लगहरूको सूची छ जुन नेटमा उत्तम फलो आउट छ। मलाई सूची मनपर्छ र हरेक महिना यसलाई जाँच गर्नुहोस्। प्रत्येक महिना, मेरो ब्लग मा छैन। हरेक महिना म किन सोध्छु। मैले मेरो उत्तर केहि दिन अघि पायो ... प्याराफ्रेज गरिएको: मेरो ब्लग मार्केटिंगमा केन्द्रित छैन।
जबकि म कदर गर्छु के केहि कडा सीमा छ को मार्केटिंग ब्लग को रूप मा परिभाषित गरिएको छ, म खुशी छु कि म सूची बनाएको छैन! यदि तपाईं एक मार्केटर हुनुहुन्छ र केवल चीजहरू तपाईंले ध्यान दिइरहनु भएको छ जुन तपाईंको विभागको भित्र र बाहिर आउने कुनै काममा छ, मार्केटिंग ब्लगहरू, पुस्तकहरू र कन्फरेन्सहरू ... शुभकामना! तपाईलाई यो चाहिन्छ।
मेरो लागि? मँ कुनै पनि समय चाँडै समाग्री बाहिर चलाउने छैन!
टैग: ब्रान्ड एक्सपोजरव्यवसाय परिणामकसरीग्राहक संचारगुगल परिवर्तनहरूKlout स्कोरपेजलेभरसामाजिक मार्गनिर्देशनसामाजिक परिदृश्यसामाजिक लगईनसामाजिक साझेदारीयातायातWordPress
तपाईंसँग वेब २.० समस्या हुन सक्छ जब…
यहाँ एक शब्द बिना तपाइँ कसरी धन्यवाद भन्नुहुन्छ!
जनवरी 6, 2008 5:24 बजे
"... धेरै सामग्रीमा ट्याप गर्दै" को सन्दर्भमा, मैले वेबसाइट मालिकहरूलाई Google को उन्नत खोज प्रकार्यहरू प्रयोग गरेर अतिरिक्त सामग्री फेला पार्ने तरिका भेटें... यसले तपाइँलाई तपाइँको खोजहरूलाई "प्रयोग गर्न नि:शुल्क, व्यावसायिक रूपमा वा परिमार्जन गर्न" सामग्रीमा लक्षित गर्न अनुमति दिन्छ... केवल एक टिप।